कोरोना खोप लगाउँदा किन रगत जम्छ? – Health Post Nepal
२०७८ मंसिर १८ गते १२:११
कार्डिफको वैज्ञानिक टोलीलाई यूके सराकारले कारण पत्ता लगाउन आपत्कालीन आर्थिक सहयोग पनि उपलब्ध गराएको थियो। अध्ययनको प्रारम्भिक परिणाम प्रकाशित भएपछि आस्ट्राजेनेकाका वैज्ञानिकहरू पनि अनुसन्धानमा सहभागी भएका थिए।
उनले भनिन्, “यो अनुसन्धानले यसैकारण हुन्छ भनेको छैन तर केही चाखलाग्दा कुराको जानकारी दिएको छ। अनि यो अनुसन्धानका आधारमा असाध्यै दुर्लभ दुष्प्रभावका रूपमा देखिएको यो रगत जम्ने समस्या हटाउन सकिन्छ कि भनेर उपायबारे कुराकानी भइरहेको छ।”
रगत जमेका मानिसमा अस्वाभाविक प्रकारको एन्टिबडी पाइयो जसले उनीहरूको रगतमा भएको ‘प्लेट्लट फ्याक्टर फोर’ भनिने प्रोटीनमा आक्रमण गरेको पाइयो
कार्डिफ विश्वविद्यालयसँग आबद्ध अनुसन्धानकर्ता प्रा. एलन पार्करले बीबीसी न्यूजलाई भने, “एडिनोभाइरसको सतह एकदमै ऋणात्मक हुन्छ र प्लेट्लट फ्याक्टर फोरचाहिँ असाध्यै धेरै धनात्मक हुन्छ। त्यसैले दुईबीच कुरा मिल्छ।”
उनले थपे, “हामी एडिनोभाइरस र प्लेट्लट फ्याक्टर फोरबीच सम्बन्ध प्रमाणित गर्न सफल भयौँ। ”
“हामीसँग भएको कुरा त्यो प्रतिक्रिया आरम्भ गर्न सहयोग गर्ने तत्त्व हो, तर त्यसपछि धेरै चरणमा अनेकौँ प्रतिक्रिया हुन्छन्।”
अनुसन्धानकर्ताहरू अबको चरणमा “हराएको रोग प्रतिरोध क्षमता” पत्ता लगाउनु हुनेछ तर त्यो थप अनुसन्धानबाट मात्र निश्चित हुनेछ।
प्रा. पार्कर भन्छन्, “यो यस्तो भएको हो भन्ने अनुमान गर्न कठिन थियो र त्यस्तो हुने मौका पनि असाध्यै कम छ। त्यसैले हामीले बृहत् कुरा हेर्न जरुरी हुन्छ किनभने यो खोपले धेरैको जीवन रक्षा गरेको छ।”
आस्ट्राजेनेकाले खोपका कारण संसारभरि गरी १० लाख मानिस बाँच्न सफल भएको र पाँच करोड जनामा कोभिड हुन रोकेको ठानिएको छ।\_
उनले भने, “अझै पनि कतिपय प्रश्नहरूको उत्तर प्राप्त हुन बाँकी नै छ। जस्तो कि केही मानिसहरूको किन रगत जम्छ र रगत खासगरी किन मस्तिष्क र कलेजोमा जम्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर प्राप्त भएको छैन। तर थप अध्ययन हुँदै जाँदा त्यो पनि पत्ता लाग्न सक्छ।”